Oreo Chocolate Ikhekhe Elifanele - Ungadliwa
izinkomishi ezingaki iphawundi yelayisi
ubhekeni oshukela onsundu oboshwe izinja ezishisayo
ungasebenzisa amapentshisi afriziwe ukwenza uphayi
Oreo Chocolate Ikhekhe Elifanele
Ama-Parfaits e-Oreo Chocolate Cheesecake yi-dessert ephelele yokubhaka enezendlalelo zikashokoledi, ikhekhe lekhekhe elisheshayo nelilula futhi elingenamvubelo le-Oreo! Lokhu kungcono kakhulu uma kwenziwa ngaphambili futhi kulula ukuhanjiswa embizeni yamasoni okwenza kube uphudingi omuhle wokuthatha.
Yize empeleni ngingalidli ithani lamaswidi, ngikuhle kakhulu UKUHLALA NGIKHONA ikhekhe likhekhe futhi-ke ngiyawathanda ama-dessert angabhakwa (ngubani ongawenzi ?!). Lokhu empeleni kuyinhlanganisela ephelele kakhulu khekhe khekhe noshokoledi, ilula futhi icebile ngasikhathi sinye.
Ngifake iresiphi yokupheka kwami ​​okulula okwenziwe ngoshokholethi okumangazayo. Kuthatha isikhashana, kodwa ngaso sonke isikhathi kuwufanele umzamo. Uma ufushane ngesikhathi noma ungathanda okuthile okushesha ngempela, ungafaka ibhokisi le- ushokoledi osheshayo pudding esikhundleni salokho.
Into enhle ngale iresiphi ukuthi uyakwazi (futhi kufanele) ukwenze ngaphambi kwesikhathi bese uvele uzifake efrijini. Kwama-potlucks, ngithanda ukuwenza lokhu ngaphambi kwesikhathi bese ngibeka isembozo kuwo ukuze ngihambele. Lapho sifika lapho siya khona, ngiyazisusa izivalo ngiziqede ngokushesha ngoshukela ophehliwe (noma ukushaywa ngesiswebhu) kanye ne-cherry.
Ukwenza lezi zimpahla zoshokholethi zingadli mahhala, ngifaka uphudingi wami nekhekhe lami kwizikhwama zeplastiki ezihlukene bese ngiqethula ekhoneni (futhi uma ungenayo umnikazi we-baggy , udinga eyodwa… Ngiyisebenzisa SONKE isikhathi)! Lokhu kuhle ku-izimbiza zamasoni, kepha zingaphakelwa nakuzo sula izinkomishi zepulasitiki noma izingilazi zewayini ngokuya ngomcimbi!
REPIN le iresiphi ye-chocolate parfait ku-DESSERT BOARD yakho!
yini ehambisana nesaladi le-taco esidlweni sakusihlwa
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokupheka0 imizuzu Isikhathi Esipheleleishumi nanhlanu imizuzu Izinkonzo6 uphudingi UmbhaliUHolly NilssonAma-Parfaits e-Oreo Chocolate Cheesecake yi-dessert ephelele yokubhaka enezendlalelo zikashokoledi, ikhekhe lekhekhe elisheshayo nelilula futhi elingenamvubelo le-Oreo! Phrinta Phina
▢1 ibhokisi loshokholethi oswidi kanye nobisi osheshayo
▢⅔ inkomishi ushukela
▢⅓ inkomishi ukhokho
▢3 wezipuni ummbila
▢2 ¼ izinkomishi ubisi
▢1 isipuni ibhotela
▢1 ½ izinkomishi ukhilimu osindayo obandayo ukushaya ukhilimu
▢½ inkomishi ushukela oluyimpuphu
▢8 ama-ounces ukhilimu ushizi ithambile
▢1 iphakethe Oreo cookies
▢ukhilimu ophehliwe noma ukushaywa okushayiwe
Faka amakhukhi esikhwameni esinoziphu bese uqeda kancane usebenzisa iphini lokugingqa. Ufuna zihlukaniswe kodwa hhayi ngokuphelele ekuchotshozweni.
Susa izipuni ezimbili zemvuthu bese ubeka eceleni ukuhlobisa.
Ibhokisi lePudding Chocolate elilungiselelwe ngokuya ngemikhombandlela
Epanini, hlanganisa ushukela, i-cocoa powder, isitashi sommbila nosawoti, uhlanganise kahle. Faka ubisi olubandayo, ugovuze uze uhlangane.
Guqula ukushisa kuye phezulu kuvuselele njalo kuze kube yilapho ingxube ifika emathunjini.
Vumela ukuthi ubilise umzuzu owodwa ngenkathi uvusa, susa emlilweni bese ugoqa ibhotela. Kupholisa ngokuphelele ngezikhathi ezithile ukugwema ukwakha isikhumba.
Ngomxube kagesi, hlanganisa ukhilimu osindayo noshukela oluyimpuphu kuze kube yiziqongo eziqinile.
Bamba ngobumnene ushizi okhilimu othambile kuze kuhlanganiswe.
Amakholori:549,Amakhabhohayidrethi:47g,Amaprotheni:7g,Amafutha:38g,Amafutha agcwalisiwe:2. 3g,Cholesterol:132mg,I-Sodium:212mg,Potassium:302mg,Umucu:1g,Ushukela:38g,Uvithamini A:1615IU,Uvithamini C:0.3mg,I-calcium:192mg,Insimbi:1mg
Igama elingukhiyeushokoledi khekhe InkamboUgwadule KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Nazi ezinye izindlela ezimbalwa ozozithanda
uyenza kanjani i-goulash ebhodweni le-crock